‘डिपोर्टबाट बच्न यी कुरामा अपनाउनुहोस् मुख्य सावधानी’ – श्री पराजुली « Khasokhas Follow @khasokhasmag
‘डिपोर्टबाट बच्न यी कुरामा अपनाउनुहोस् मुख्य सावधानी’ – श्री पराजुली
-श्री पराजुली, डाइरेक्टर, मुनगोभन एण्ड एसोसिएट्स
कार्यकारी आदेशपछि नेपालीहरु प्रभावित भएका घटना कस्ता छन् ?
राष्ट्रपतिले कार्यभार सम्हालेपछि केही आदेशहरु जरी गर्नुभएको छ । त्यसमा नेपालीहरु जोडिएको विषय अध्यागमन सम्बन्धित थियो । राष्ट्रपतिले केहीदेशका नागरिकलाई आवधिक भिसा प्रतिबन्ध लगाउने गरी र शरणार्थी कार्यक्रम केही समयका लागि रद्द गर्ने गरी जारी गरेको कार्यकारी आदेशपछि नेपालीहरुमा त्राहीमाम फैलियो । तर त्यो जरुरी थिएन । राष्ट्रपतिको आदेश नेपालसँग सम्बन्धित थिएन ।
उहाँले निश्चित सातवटा देशलाई मात्र केही समयको लागि भिसामा प्रतिबन्ध लगाउने आदेश जारी गर्नुभएको थियो । त्यस्तै कागजपत्रबिहिनलाई अमेरिकाबाट डिपोर्टेशनको प्रकृयामा लैजाने ट्रम्प प्रशासनको नीतिले धेरै नेपालीहरु मानसिक रुपमा त्रसित बने । ग्रिनकार्ड भएका नेपालीहरुदेखि शरणार्थीका लागि आवेदन दिएका, टीपीएस लिएका नेपालीहरु र कागजपत्र नभएकाहरुसम्म त्राहीमाम भए । त्यसबारेमा प्रश्नहरु आए । मैले त्राहीमाम नहुन सल्लाह दिएँ ।
अमेरिकामा बसिरहेका नेपालीहरु कागजपत्रबिहिन नै भएपनि राष्ट्रिय सुरक्षामा आँच आउने काम नगरेमा र अपराध नगरेसम्म तत्काल घरमा आएर समातेर डिपोर्ट गर्ने सम्भावना छैन । न्युयोर्क सहर कागजपत्रबिहिनका लागि सुरक्षित सहरमा रहेकाले न्युयोर्कमा हुनेहरुले अझ धेरै चिन्ता लिन जरुरी छैन । सुरक्षित क्षेत्रमा नहुनेहरुले पनि मास डिपोर्टेशनमा परिएला कि भन्ने चिन्ता लिन जरुरी छैन । किनभने हरेक कुराका कानुनी प्रकृया छन् । अदालतमा जानुपर्छ ।
अदालतले सुनुवाई राखेर फैसला गर्नुपर्छ । देशनिकालाको फैसला गरेपनि ट्राभल डकुमेन्ट जारी गर्नेदेखि अन्य प्रकृयाहरु छन् । घरमा आएर आफ्नो देश फर्केर जा भन्ने अवस्था हुँदैन । तर सामाजिक सञ्जालहरुमा अतिरञ्जित समाचारहरु आउँदा कैयन नेपालीहरु डराउनु स्वभाविक हो । तर त्यस्तो तर्सनुपर्ने अवस्था छैन ।
कुनै नेपालीहरुलाई नेपाल फर्कन भनिएका वा कार्यकारी आदेशपछि प्रभावित भएकाले समस्या लिएर तपाई कार्यरत ल फर्ममा कुनै नेपालीहरु आएका छन् ?
एउटा पनि आएको छैन । पटक्कै आएको छैन । राष्ट्रपति, रिपब्लिकन पार्टीका मान्छेहरु कसैले पनि नेपालीका सन्दर्भमा कुनै अभिव्यक्ति दिएका छैनन् । म कार्यरत ल फर्ममा आउने फोनकलहरुमा पनि कसैले समस्यामा परिसकेको गुनासो गरेका छैनन् । जिज्ञासाहरु चाँही आइरहेका छन् ।
प्रभावित भएका एउटा पनि घटना हामीसमक्ष आएका छैनन् । यस सन्दर्भमा सबै नेपालीहरुलाई म के भन्न चाहन्छु भने राष्ट्रपतिको आदेश, राष्ट्रपतिका मान्छेहरु, ह्वाइट हाउस वा रिपब्लिकन पार्टीका मान्छेहरुबाट कुनै पनि नेपालीलाई अहिलेसम्म कुनै धम्की दिइएको छैन । र गरिने पनि छैन । यो केवल अतिरञ्जनामात्र गरिएको हो । कागजपत्र भए पनि नभएपनि अमेरिकाभित्र आइसकेको कोही पनि नेपाली असुरक्षित छैन ।
सुरक्षित प्रकारका शहरमा हुनेहरु अझ सुरक्षित छन् । सिधै घरमा आएर देशनिकाला गर्ने कुनै प्रावधान छैन । अपराधमा संलग्न नभएको खण्डमा र राष्ट्रिय खतरामा हानी नगरेमा नेपालीहरु सुरिक्षत छन् । सामाजिक संजालमा नेपाल फर्क भनिएका जस्ता समाचारमा कुनै सत्यता छैन ।
अमेरिकामा रहेका नेपालीहरुले अब कस्तो सावधानी अपनाउनुपर्ला ?
सबैभन्दा पहिले अनावश्यक त्रासबाट मुक्त हुनुपर्छ । त्यसपछि कानुनी रुपमा सुरक्षित हुनतर्फ लाग्नुपर्छ । कुनै अपराधमा संलग्न हुनुभएन । काम रहेको बखत कम उमेरका व्यक्तिलाई चुरोट र मादकपदार्थ बेच्नुभएन । मादक पदार्थ सेवक गरेर गाडी चलाउनुभएन । आफूलाई सुरक्षित राख्ने प्रयास गर्नुहोला । टिकट पाउने अवस्था सृजना नगर्नुहोला । सौम्य र भद्र अवस्थामा राख्नुहोला । तपाईको कागजपत्र नभएपनि तत्कालै डिपोर्ट हुने खतरा हुँदैन ।
(यी केवल पराजुलीले आफ्नो अनुभवका आधारमा दिनुभएका सुझाव हुन् । कानुनी सल्लाहहरु होइनन् । कानुनी सल्लाहका लागि लाइसेन्सप्राप्त कानुन व्यवसायीसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ । )